Microsoft ayaa cusbooneysiineysa OneDrive si ay ugu shaqeyso asal ahaan M1 Macs | Waxaan ka socdaa mac
Microsoft waxay cusbooneysiineysaa OneDrive si ay ugu shaqeyso asal ahaan M1 Macs
Microsoft ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku cusbooneysiineyso barnaamijkeeda OneDrive taas oo u shaqeysa wadaniga on Apple M1 Macs dabayaaqadii 2021, oo ay weheliso hagaajinta waxqabadka kale ee qorshaysan. OneDrive waxaa hadda lagu heli karaa Rosetta 2 oo ku saabsan nidaamyada M1.
Dhamaadka sanadkan, Microsoft ayaa cusbooneysiin doonta barnaamijka Mac si ay si caadi ah ugu shaqeyso mashiinada M1. OneDrive waxaa hadda lagu heli karaa Rosetta 2 oo ku saabsan nidaamyada M1.
Cusbooneysiin ayaa sidoo kale la qorsheeyay taas waxay awood u siineysaa dhaqdhaqaaqa galka la yaqaan (KFM) ee isticmaala macOS. KFM waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala OneDrive inay marin u helaan faylasha aaladaha iyo barnaamijyada kala duwan, isbadalada si otomaatig ah ayey ula midoobi doonaan OneDrive. Sidoo kale, haddii adeegsade uu sameeyo cusboonaysiinta qalabka, KFM si otomaatig ah ayey ugu gudbin kartaa dhammaan faylasha cusub OneDrive.
Xirfadlayaashu sidoo kale waxay u isticmaali karaan hanti asal ah inay si toos ah u dhaqaajinaya waxyaabaha ku jira fayl desktop-ka, dukumiintiyo iyo sawiro si OneDrive ah. Waxay sidoo kale hagaajin doontaa waayo-aragnimada isku-dhafan ee 'OneDrive sync' ee loogu talagalay dadka isticmaala macOS, taas oo ku saleysnaan doonta barnaamijka cusub ee faylka bixiya ee Apple. Cusbooneysiinta ayaa horumarin doonta khibrada Raadiyaha ee OneDrive, iyadoo laga dhex arki karo "goobaha" dhinaca Finder.
Waa laga yaabaa isticmaal warbixinnada maamulka mustaqbalka. Maamulayaashu way awoodi doonaan inay eegaan warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan adeegsadayaasha macOS ee wada OneDrive Sync iyo wixii khaladaad ah ee ay la kulmaan.
Sida kiniin dheeraad ah waxaan dhihi karnaa dhamaadka Juun, dadka isticmaala iOS iyo iPadOS way awoodi doonaan tafatir dukumiintiyada Xafiiska in ay u calaamadeeyeen adeegsiga khadka tooska ah ee barnaamijka moobilka barnaamijka Microsoft. Faylasha wax laga beddelay waxay la midoobi doonaan OneDrive mar haddii isticmaaleyaashu ku soo laabtaan khadka tooska ah. Tani waxay u oggolaan doontaa isticmaalayaasha inay ka soo qaadaan meeshii ay kaga tageen qalab kale markii dambe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Microsoft waxay cusbooneysiineysaa OneDrive si ay ugu shaqeyso asal ahaan M1 Macs
Apple waxay dooneysaa inay ka saarto ereyada sirta ah ee macOS mahadnaq ereyada sirta ah